मोर्चाको नेपाल बन्दः कहाँ के भयो ? - HAMRO YATRA
मोर्चाको नेपाल बन्दः कहाँ के भयो ?
काठमाडौं, फागुन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आज नेपाल बन्द आब्हान गरेको छ । बन्द गराउँदै हिंडेका ५८ जनालाई बिहानै नियन्त्रणमा लिइएको काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ । बन्दका क्रममा ललितपुरमा अवरोध र्पुयाउने ३५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । लतिलपुरको सातदोबाटो र पुल्चोकबाट ती वन्दकर्तालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
यस्तै भक्तपुरको ठिमीबाट ९ जना र काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट १४ जना नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी कन्ट्रोल रुमले जानकारी दिएको छ । बन्दको काठमाडौं उपत्याकामा सामान्य प्रभाव परेपनि तराइका जिल्लामा भने प्रभाव परेको छ । वन्दका कारण उपत्यकामा छिटपुट सवारीसाधन चलेपनि लामो दुरीका गाडी भने चल्न सकेका छैनन् । तराईका जिल्लामा भने बन्दको प्रभाव पूर्ण रुपमा परेको छ । त्यहाँ सवारी साधन ठप्प छन् । मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले ठाउँ ठाउँमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै पूर्वी नेपालमा पनि बन्दको प्रभाव सामान्य परेको छ । छिटपूट मात्रामा सवारी साधन चले पनि शैक्षिक संस्था, कलकारखान बन्द रहेका हाम्रा धनकुटा सहकर्मी प्रशान राइले बताए । त्यस्तै पश्चिम नेपालका बुटवल, दाङ, बाँके, सुर्खेतमा पनि बन्दको प्रभाव सामान्य परेको छ । त्यहाँ पनि शैक्षिक संस्था, कलकारखान बन्द छन् भने कुटनीतिक नियोग, सञ्चार माध्याम एम्बुलेन्स लगायतका अत्यावश्यकीय सवारी साधन भने चलेका छन् ।